Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Emirates na-agbasawanye netwọkụ ya na ebe 70
Airlines • Airport • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akwụkwọ akụkọ Kuwait • News • Akụkọ na -agbasa ozi na Portugal • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • trending Ugbu a • Akụkọ na -agbasa UAE • Akụkọ dị iche iche
Emirates na-ebigharị ụgbọ elu na Kuwait City na Lisbon, na-agbasawanye netwọkụ ya na ebe 70
Emirates ekwuputala na ọ ga-amaliteghachi ọrụ ndị njem na Kuwait City (5 August) na Lisbon (16 August). Nke a ga - ewe ndị njem njem nke Emirates gaa ebe 70 na Ọgọst, ihe karịrị 50% nke netwọọdụ na - ebute ọrịa na - efe efe, ebe ụgbọ elu jiri nwayọọ nwayọọ malite ọrụ yana nchekwa nke ndị ahịa ya, ndị ọrụ ya na obodo ya dị ka ihe kacha mkpa.
Gbọ elu si Dubai gaa Kuwait City ga-arụ ọrụ dị ka ọrụ kwa ụbọchị na ụgbọ elu si Dubai gaa Lisbon ga-arụ ọrụ ugboro atọ n'izu. A ga-arụ ọrụ ụgbọ elu ndị a na Emirates Boeing 777-300ER.
Ndị njem na-eme njem n’etiti America, Europe, Africa, Middle East, na Asia Pacific nwere ike ịnwe njikọ dị mma ma dịkwa mma site na Dubai. Ndị ahịa sitere na netwọkụ nke Emirates nwere ike ịkwụsị ma ọ bụ gaa Dubai ebe ọ bụ na emeghewo obodo maka azụmaahịa mba ụwa na ndị ọbịa.
Covid-19 Nyocha PCR dị mkpa maka ndị njem na-abata na ndị njem na-abịa Dubai (na UAE), gụnyere ụmụ amaala UAE, ndị bi na ndị njem nleta, n'agbanyeghị mba ha si abịa.
Ebe a na-aga Dubai: Site na mmiri osimiri na ihe nketa na-abanye na nlekọta ụlọ ọrụ na oge ntụrụndụ, Dubai bụ otu n'ime ebe ụwa kachasị ewu ewu. Na 2019, obodo ahụ nabatara ndị ọbịa nde 16.7 ma kwado ọtụtụ narị nzukọ na ngosipụta ụwa niile, yana egwuregwu na egwuregwu.
Ebe ọ bụ na Dubai emeghere ndị njem nleta na 7th July, ruo ugbu a ọnụ ọgụgụ nke ikpe ọhụrụ COVID-19 gafee UAE nọgidere na-adịgide adịgide ma na-agbada ihu ala. Dubai bụ otu n’ime obodo izizi ụwa iji nweta stampụ njem njem site na World Travel and Tourism Council (WTTC) - nke na-akwado usoro zuru oke na nke dị irè nke Dubai iji hụ na ahụike na nchekwa ndị ọbịa.